Thwebula Effector saver 3.3.6 – Vessoft
Thwebula Effector saver
Ilayisensi: Ezamahala, isivivinyo
Effector hlenga – isofthiwe isipele idatha corporate noma siqu. Inhloso ngqangi yalo isofthiwe ukudala amakhophi agade ingozi alo iyiphi inguqulo ye yolwazi ye 1c: software Enterprise. Effector hlenga iqukethe iqoqo amathuluzi ukulungisa ukusebenza software futhi test futhi silungise database. Isofthiwe kwenza ukuba isipele amafayela ethize, amafolda, Microsoft SQL noma PostgreSQL elisekela futhi uwugcine network, angaphandle wendawo nangaphandle noma FTP amaseva. Effector hlenga uyakwazi ukwenza ngokuzenzakalelayo isipele idatha ngokuhambisana nesimiso ecacisiwe usebenzisa esakhelwe umsebenzi Planner.
Ukubekwa ethala by the 1c: Enterprise izindlela
Ukubekwa ethala idatha okungahleliwe noma SQL yolwazi
Testing and fixing izisekelo
Various isipele kokucindezelwa takhiwo
Ukugcina of kwideskithophu on the ezahlukene storages idatha
Ukubethela amafayela yokusekelayo
Amazwana ku Effector saver
Effector saver software ehlobene
Amathuluzi ukulanda futhi ulayishe amafayela kusuka FTP-amaseva. Isofthiwe isekela ezihlukahlukene imisebenzi ewusizo futhi Izivumelwano ukudlulisa ifayela esiphephile amaseva.
Ithuluzi ukusebenza idatha kusuka isitoreji ifu isevisi ye-Google. Isofthiwe kuqinisekisa ngejubane ukukhiqiza umsebenzi ngamafayela.
Isofthiwe iyalondoloza idatha. Isofthiwe yenza amandla okusindisa amakhophi okusekelayo kubathwali bezintatha, umshini wendawo noma amaseva we-FTP.
Ithuluzi ukuhlola futhi sihlaziye amakhono uhlelo. Isofthiwe ubonisa ulwazi mayelana nehardware yekhompyutha yakho ingxenye.
Isofthiwe yenza ama-skrini, ifakwe kalula ukusebenzisa isethi yamathuluzi ukwengeza amanothi kuzikrini noma izithombe.